Sherlock Holmes miorina 'Ireo tsy ara-dalàna' dia nofoanana tao Netflix Taorian'ny vanim-potoana iray
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Sherlock Holmes miorina 'Ireo tsy ara-dalàna' dia nofoanana tao Netflix Taorian'ny vanim-potoana iray
by Trey Hilburn III Enga anie 4, 2021
by Trey Hilburn III Enga anie 4, 2021 1,920 hevitra
Ireo tsy ara-dalàna efa nifarana tamin'ny Netflix. Ny andiany nifantoka tamin'izao tontolo izao manodidina an'i Sherlock Holmes sy Dr. Watson dia tsy naharitra ela akory taorian'ny nanombohany premiering tamin'ny fiandohan'ity taona ity.
Ilay tsy ara-dalànaNanaraka andian-jatovo izay namboarina hiasa amin'ny famahana tranga ho an'ny Dr. Watson sy Sherlock Holmes. Ny endri-tsoratra roa dia endrika samy hafa amin'ny an'ny mahazatra. Tena ratsy toetra izy ireo tamin'ny lafiny sasany namela ireo zatovo izay namboarina ho mpanadihady manokana ary mifantoka amin'ilay fampisehoana.
Ny andiany dia nanao tsara mba hidirana ao amin'ny slot 10 ambony an'i Netflix nandritra ny faran'ny faran'ny herinandro teo tamin'ny faran'ny volana martsa. Noho izany, tsy maintsy ho nanao tsara izany.
Ireo tsy ara-dalàna izay nifototra tamin'ny asan'ny mpanoratra malaza Arthur Conan Doyle no kintana Thaddea Graham, McKell David, Jojo Macari, Harrison Osterfield sy Darci Shaw, Clarke Peters ary Henry Lloyd-Hughes izay nilalao ny anjara asan'i Sherlock Holmes.
Omeko tsiny ny marketing amin'ity iray ity. Tsy nazava mihitsy ny momba an'io mazava io. Izy io koa dia karazana fandevenana ny lede rehefa tonga amin'ny haavon'ny fidiran'ny Dr. Watson sy Sherlock Holmes.
Nijery ve ianao Ireo tsy ara-dalàna? Malahelo ve ianao mahita azy mandeha? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Barney the dinosaur dia tonga nihinana anao tao amin'ny Resident Evil: Village. Zahao eto ny horonan-tsary filalaovana.